प्रत्येक साँझ महेशबाट मनिषा - Himalkhabar.com
नेपालको संविधान–२०७२ ‘ट्रान्सजेन्डर’ र ‘गे’हरुको अधिकार संरक्षणका लागि यस क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी प्रगतिशील संविधान बनेको छ । तर उनीहरुको सामाजिक स्वीकार्यताले भने मुर्त रुप लिइसकेको छैन ।
सबै तस्वीर: उपासना खड्का
दिउँसो व्यापारी र निष्ठावान छोराको भूमिकामा रहने महेश राति मनिषा बन्छन् । यो महिला रुप उनलाई सहज र आत्मीय लाग्छ ।
मुना र मनिषा रोलीको अपार्टमेन्टमा थिए त्यस दिन । आफ्नी संरक्षक रोलीलाई उनीहरु ‘आमा’ भन्छन् ।
“बाहिर रानी बनेर हिंड्नु सजिलो छैन,” मनिषा भन्छिन्, “पहिलेदेखि रानी बनेकाहरु आफ्नो क्षेत्रमा नयाँलाई देखेपछि आक्रमक हुन्छन् ।” यस्तो बेला कुनै ‘रानी’ को संरक्षणमा बाहिर निस्कँदा सजिलो र सुरक्षित भइने उनले बताइन् ।
“शुरुमा यो परिवर्तन साँच्चिकै डरलाग्दो हुनसक्छ, तर त्रास र अनिच्छालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने रोलीलाई ठ्याक्कै थाहा छ,” उनी भन्छिन् ।
फरासिली रोलीले आफ्ना कुरा सहजै सुनाइन् । चितवनमा रमेशका रुपमा जन्मे–हुर्केकी उनलाई आफू फरक छु भन्ने सानैदेखि थाहा थियो । “खै किन हो मैले आफूलाई केटीजस्तै महशुस गर्थें, फेसबुकको फेक अकाउण्ट मार्फत आफूजस्ता धेरैसँग सम्पर्क हुन पुग्यो,” उनले भनिन् ।
काठमाडौंका मुना र मनिषाभन्दा निरजाको दोहोरो जीवन धेरै सहज छ । वर्षमा एकदुई पटक चितवन जाँदा मात्रै उनले आफ्नो ‘बिक्रम’ रुप धारण गर्नुपर्छ बाँकी समय उनी निरजा नै हुन्छिन् । सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिइसकेकी उनलाई फोटो खिचाउन पनि कुनै आपत्ति छैन ।
“हाम्रो अवस्थाबारे मिडियामार्फत चेतना जगाउन सकियो भने अभिभावक सामू आउन सहज हुन्छ होला,” नक्कली परेला लगाउँदै गरेकी निरजाले भनिन् ।
उनले थपिन्, “जीवन धान्नका लागि पुग्ने कमाई गरेर छोराकोे कर्तव्य पूरा गर्न सकें भने बुवा–आमाले पनि मलाई महिलाका रुपमा स्वीकार्न सक्नुहुन्छ होला ।”
मनिषा, मुना, निरजा, रोली र मनु सबैको विचारमा ‘रानी’ बन्न छाला बाक्लो बनाउनै पर्छ । मुना भन्छिन्, “मानिसहरु हामीलाई सताउँछन् । पुलिस, जड्याँहा र ड्रग एडिक्टहरु पिछा गर्छन्, अनेकौं नामले बोलाउँछन, दु:ख लाग्छ ।”
यती हुँदाहुँदै पनि ‘रानी’ बनेर बाहिर निस्किरहेका उनीहरुलाई समाजले पूर्णरुपमा स्वीकार्ने दिनको प्रतीक्षा छ ।
“जहिले पनि मभित्र केही ठूलै गल्ती भएको छ जस्तो
लाग्थ्यो, म किन आफ्ना दाजु बहिनीहरुजस्तै सामान्य छैन ? किन म गलत शरीरमा फसेकी छु ? मलाई ट्रान्सजेन्डरका बारेमा केही थाहा थिएन,” उनले भनिन् ।
अन्तत्वगत्वा बैंकमा काम गर्ने उनलाई एकजना उनीजस्तै व्यक्तिले ‘ब्लू डायमण्ड सोसाइटी’ मा पुर्‍याएपछि थाहा भयो, उनीमाथि केही गलत भएको रहेनछ ।
अहिले एकजना ट्याक्सी ड्राइभरकी दोस्री पत्नी भएकी शर्मिलाले फ्रेम गरिएको विवाहको फोटो गर्वसाथ देखाइन् । “हरेक केटीले आफ्नो विवाहको सपना देखेकी हुन्छे, मैले पनि विवाह गरें,” उनले भनिन् ।
नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरुले सीमामा धर्ना दिए । यता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले भने आफूहरुलाई समान अधिकार दिइएको संविधानको खुलेर स्वागत गरे ।
नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएपछि नेपाल लेस्वियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर र इन्टरसेक्स (एलजीबीटीआई) समुदायलाई संविधानमार्फत समान अधिकार दिने एशियाको पहिलो र विश्वकै तेस्रो राष्ट्र (पहिलो साउथ अफ्रिका र दोस्रो इक्वेडोर) भएको छ ।
नेपाली नागरिकले आफ्नो लैंगिक पहिचान नागरिकता र पासपोर्टमा महिला, पुरुष वा अन्यका रुपमा उल्लेख गर्न पाउने संविधानको धारा २१ मा व्यवस्था गरिएको छ । राहदानी विभागले ‘अन्य’ समूहको पासपोर्ट ट्रान्सजेन्डर एक्टिभिस्ट मोनिका शाहीलाई प्रदान गरिसकेको छ ।
संविधानको धारा १८ ले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई राज्य र न्यायिक निकायले भेदभाव गर्नबाट बन्देज लगाएको छ भने धारा ४२ ले निजामती र राज्यका अन्य निकायमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
ट्रान्सजेन्डर एक्टिभिस्टले अल्पसंख्यकहरुको अधिकार सुरक्षाका लागि सरकारको प्रयासको प्रशंसा गरेका छन् तर यसको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त छ ।
“संविधानमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरिएकोमा हामी धेरै खुशी छौं, अब सरकारले त्यसको सहज कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” ट्रान्सजेन्डर एक्टिभिस्ट भूमिका श्रेष्ठ भन्छिन् । सरकारले समलिंगी विवाह, उनीहरुको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, धर्म पुत्र–पुत्री राख्न पाउने अधिकार र सकारात्मक विभेदका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
सर्वोच्च अदालतले एलजीबीटीआईलाई तेस्रोलिंगीका रुपमा पहिचान दिन र समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन सन् २००७ मै आदेश दिइसकेको छ । ब्लू डाइमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ सरकारले संविधानका नयाँ प्रावधानहरुको प्रचारप्रसार गरेर कार्यान्वयन सहज बनाउनु पर्ने बताउँछिन् ।
“संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अधिकांश यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्न समस्या छ,” गुरुङ भन्छिन, “स्थानीय अधिकारीहरुलाई यसबारे थाहा छैन, सरकारले यसबारे आवश्यक सूचना सबै निकायहरुमा पुर्‍याउनु जरुरी छ ।”
एलजीबीटीआई के हो ?
लेस्बियनः महिलाप्रति आकर्षित वा महिलासँग प्रेम गर्ने महिला
गेः पुरुषप्रति आकर्षित वा पुरुषसँग प्रेम गर्ने पुरुष
बाइसेक्सुअलः समानलिंगी र विपरीतलिंगी दुबैप्रति आकर्षित हुने महिला वा पुरुष
ट्रान्सजेन्डरः जन्मँदा शरीरले निर्धारण गरेको लिंग वा पहिचान भन्दा ठूलो भएर आफूलाई बुझेपछिको लैंगिक पहिचान ठीक विपरीत भएको व्यक्ति । पुरुष रुपमा जन्मेको व्यक्ति ठूलो भएपछि आफूलाई महिलाजस्तो महशुस गर्ने वा महिला रुपमा जन्मेको व्यक्ति ठूलो भएपछि आफूलाई पुरुषजस्तो महशुस गर्ने व्यक्ति ।
इन्टरसेक्सः जन्मँदा महिला वा पुरुष भनेर लिंग नछुट्टिएको व्यक्ति ।